टप टेन डाक्टर: जसले स्वास्थ्यमा गरे चामत्कारिक परिवर्तन « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
टप टेन डाक्टर: जसले स्वास्थ्यमा गरे चामत्कारिक परिवर्तन
२०७७, २८ फाल्गुन शुक्रबार १३:३६ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार । चिकित्सा क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पुर्याउने थोरै व्यक्तिहरु मात्र हुन्छन् । जसले आफ्नो भूमिकालाई संसारभर अव्वल बनाएका छन् । अव्वल भूमिका निर्वाह गरेका संसारका १० जना बैज्ञानिक चिकित्सकहरुको योगदानबारे चर्चा गरेका छौं ।
डा.एडवर्ड जेनर : विफर खोपका आविश्कारक
१७ मे १७४९ मा ग्लोसेस्टरशायरको बर्कलेमा जन्मिएका एडवर्ड जेनर एक अंग्रेजी चिकित्सक र वैज्ञानिक थिए जसले विश्वमा नै पहिलोपटक विफर खोप विकसित गरे । इम्यूनोलोजीका पिता समेत भनेर चिनिएका डा. जेनर र उनको कामलाई ‘अरू कुनै पनि मानवको काम भन्दा बढी जीवन बचाएको’ भनियो । वास्तवमा त्यो बेला १० देखि २० प्रतिशत व्यक्तिको मृत्यु विफरबाट हुने गर्दथ्यो । तर सन् १९७९ सम्ममा विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वबाट विफर हटाएको थियो । उनले सर्जरी क्षेत्रमा आफ्नो करियर बनाएका थिए । उनको मृत्यु सन् १८२३ मा ७३ वर्षको उमेरमा इंगल्याण्डमा भएको थियो ।
डा.एलिजाबेथ ब्ल्याकवेलः अमेरिकामा पहिलो महिला चिकित्सक
३ फेब्रुअरी १८२१ मा इंगल्याण्डको ब्रिस्टलमा जन्मिएकी एलिजावेथ ब्ल्याकवेल संयुक्त राज्य अमेरिकामा पहिलो महिला फिजिसियन चिकित्सक हुन् । उनी सन् १८३२ मा सिन्सिनाटी ओहमा बसाई सरिन् र २३ जनवरी १८४९ मा ग्राजुएट गर्ने पहिलो महिला भइन् । मेडिकल स्कूलको कार्यकालमा डा. ब्ल्याकवेलले धेरै विभेदकारी अवरोधहरूको सामना गर्नुप¥यो किनभने उनी महिला थिइन् । उनलाई प्रायः लेक्चरको समयमा अलग बस्न बाध्य तुल्याइन्थ्यो । केही प्रयोगशालामा जानबाट वञ्चित गराइन्थ्यो ।
महिलाको रूपमा आफ्नो परम्परागत भूमिकाबाट बाहिर निस्कने आँट गरेकोमा उनी शहरवासीहरुसँग बारम्बार डराउने गर्थिन् । न्युयोर्क शहरमा उनले आफ्नै क्लिनिक खोलेर गरिब र पीडित महिलाहरुको उपचारमा विशेषज्ञता हाँसिल गरिन् । डा. ब्ल्याकवेलले न्यूयोर्कमा धेरै गरिब महिला र बालबालिकाहरु खोज गरिन् । सन् १८६८ मा डा.ब्ल्याकवेलले न्युयोर्कमा महिला मेडिकल कलेज खोलिन् । लन्डन र इंगल्याण्डमा नेशनल हेल्थ सोसाइटीमार्फत सहयोग गर्न थालिन् । डाक्टर ब्ल्याकवेलले आफ्नो जीवनकालभर महिलाको लागि चिकित्सा क्षेत्रमा समानता ल्याउन काम गरिन् ।
डा.डानियल हेल विलियम्सः पहिलो सफल ओपन हार्ट सर्जन
डेनियल हेल विलियम्सको जन्म १८ जनवरी १८५६ मा होलिडेसबर्ग, पीएमा भएको थियो । त्यस युगका कठिनाइ र जातीय पूर्वाग्रहको बावजुद पनि अफ्रिकी अमेरिकी डा. विलियम्स शल्यचिकित्सक (सर्जन) बन्न सफल भए । उनले पेरीकार्डियमको सफल शल्यक्रिया गरे । डा. विलियम्सले प्रोविडेन्ट अस्पताल र ट्रेनिङ स्कूल, शिकागोको स्थापना गरे ।
यो संयुक्त राज्यमा पहिलो गैर—विभाजित अस्पताल र अफ्रिकी अमेरिकीहरूका लागि सम्बन्धित नर्सिङ स्कूल हो । यसलाई कुक काउन्टीको प्रोविडेन्ट अस्पताल भनेर चिनिन्छ । यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको पहिलो अस्पताल हो जुन अफ्रिकी अमेरिकीहरूद्वारा स्वामित्व र प्रबन्ध गरिएको थियो ।
डा. सर अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ : पेनिसिलिनका आविष्कारक
डा. सर लेक्जेन्डरलाई शुक्ष्म प्राणी विज्ञको रुपमा पनि चिनिन्छ । उनले औषधि विज्ञानको क्षेत्रमा चमत्कार नै गरे । सन् १९२१ मा उनले टिश्यू र स्रावमा ब्याक्टेरियोलाइटिक पदार्थ लाइसोजाइम पत्ता लगाए । सन् १९२८ मा इन्फ्लूएन्जा भाइरसको अध्ययन गर्दा उनले गल्तिले पेनिसिलिन पत्ता लगाए । उनले प्लेटमा स्ट्याफिलोकोकस कल्चर छाडेका थिए र त्यसमा मोल्ड विकास भएको पाए । मोल्डले यसको वरिपरि ब्याक्टेरिया मुक्त सर्कल सिर्जना ग¥यो । यस कल्चरको थप अध्ययन गरेपछि उनले यसले स्टेफिलोकोसीको बृद्धिलाई ८०० पटकको पातलोपनमा पनि रोक्न सक्ने पत्ता लगाए र यो पेनिसिलियम न्याटम परिवारको हिस्सा थियो ।
उनले यसलाई ‘पेनिसिलिन’ नाम दिए र ईतिहास रचे । उनले रसायन उपचार पद्धति जसलाई कीमोथेरापी भनिन्छ, यो पनि उनैले विकास गरेका हुन् । सन् १९४५ मा नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेन्डरले व्याक्टेरियोलोजी र इम्युनोलोजीमा वैज्ञानिक करियर बनाएका थिए । ६ अगस्ट १८८१ मा स्कटल्याण्डको आर्शीरमा जन्मेका सर अलेक्ज्याण्डर फ्लेमिङले पहिलो विश्वयुद्धमा सेनाको मेडिकल कोर्पसमा कप्तानको रूपमा सेवा गरे । डा. फ्लेमिङको एन्टिसेप्टिक्स र रगतको प्राकृतिक जीवाणुनाशक विशेषताहरूमा विशेष चासो थियो । उनको मृत्यु ७४ वर्षको उमेरमा ११ मार्च १९५५ मा भयो ।
डा.हेलन ब्रोक तौसिंगः पेडियाट्रिक कार्डियोलोजीका आविश्कारक
२४ मे १८९८ मा क्याम्ब्रिज एमएमा जन्मेका हेलेन ब्रोक तौसिग पेडियाट्रिक कार्डियोलोजी पत्ता लगाउने अग्रणी अर्थात आविश्कार मानिन्छन् । उनको सेमिनल काम मुटुको ‘कन्जेनिटल मलफार्मेशन्स’ सन् १९४७ मा प्रकाशित भएको थियो । उनले ‘ब्ल्याकलक—थोमस—तौसिग सन्ट प्रोस्युजर’ अवधारणा विकसित गरे जुन फेलोटको टेट्रालोगीका साथ जन्मेका बच्चाहरूमा सफलतापूर्वक बाँच्न सक्षम छ, यो कुटिल बच्चा (व्लु वेवी ) सिन्ड्रोमको मुख्य कारणहरू मध्ये एक हो ।
डा. तौसिंग थालाइडोमाइड प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा परिचित थिए । जसले गर्भावस्थामा रहेका शिशुहरुमा गम्भिर कुरूपता निम्त्याएको थियो । उनले थालिडोमाइड प्रतिबन्धित गर्नुपर्ने कारण प्रमाणित गरिन् । यसको फलस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोप दुबैमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । डा. तौसिगले शिशुहरूको मुटु र फोक्सोमा हुने परिवर्तनहरूको कम आक्रामक निगरानीको लागि एकैसाथ एक्स—रे र फ्लोरोस्कोपीको प्रयोगलाई बढावा दिन पनि काम गरिन् । सन् १०६० मा डा. तौसिग अमेरिकन कलेज अफ कार्डियोलोजीकी पहिलो महिला अध्यक्ष बनेकी थिइन् । उनले आफ्नो बैज्ञानिक करियर कार्डियोलोजी क्षेत्रमा बनाइन् । उनको मृत्यु ७७ वर्षको उमेरमा सन् १९८६ मा भएको हो ।
डा. चाल्र्स रिचर्ड ड्रिउः फादर अफ ब्लड बैंक
३ जुन १९०४ मा वाशिंगटन डीसीमा जन्मेका चाल्र्स रिचर्ड ड्रिउ एक अफ्रिकी अमेरिकी शल्यचिकित्सक थिए । व्लड ट्रान्सफ्युजनको क्षेत्रमा विशेष चासो लिने मेडिकल अनुसन्धानकर्ता थिए । उनले रगत भण्डारण (ब्लड स्टोरेज) गर्ने उन्नत प्रविधिहरू विकास गरे जुन दोस्रो विश्वयुद्धको दौरानमा ठूलो मात्रामा व्लड बैंकहरू विकास गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो । डा.चाल्र्सले व्लड मोमाइल्स पनि विकास गरे जुन त्यस समयमा भण्डार गरिएको रगतको फ्रिजहरू भएको ट्रक मात्र हुन्थे । डा.चाल्र्सले रगत (व्लड) संकलन प्रक्रिया सुधार गरे ।
जहाँ रक्तदाताहरुलाई रगत दान गर्ने केन्द्रिकृत ठाउँको सुनिश्चितता भयो र उनीहरु सजिलै रगत दान गर्न जान सक्थे । उनले सबै रगत प्लाज्मा शिपमेन्ट गर्नु भन्दा पहिले परीक्षण गरे । यो सुनिश्चित गर्न कोशिस गरे कि कुशल कर्मचारीबाहेक प्लाज्मालाई सम्बोधन गर्न सकिदैन । उनको काम अमेरिकी रेडक्रस ब्लड बैंक नै शुरुवात बिन्दु भयो । उनले आफ्नो अधिकांश समय जनरल सर्जनको रुपमा बिताए । तर उनको मृत्यु ४५ वर्षको सानो उमेरमा भयो ।
डा.माइकल एलिस डेबेके : मुटु शल्य चिकित्साका पायनियर
७ सेप्टेम्बर १९०८ मा माइकल एलिस डेबेकेको जन्म लेबानीको क्रिश्चियन आप्रवासी परिवार लेक चाल्र्स एलएमा भएको थियो । ७७ वर्ष भन्दा बढीको करियरमा डेबेके संसारको अग्रणी मुटु सर्जनहरु मध्ये एक थिए । उनले राष्ट्रपति र सेलिब्रेटीलगायत ६०,००० भन्दा बढी मुटुका बिरामीहरूको शल्यक्रिया गरेका थिए । डा.डेबेकेले सन् १९३२ मा हार्ट लङ मेसिनको हिस्सा कम्पोनेन्ट्सको विकास गरे । सन् १९५० को दशमा उनले भास्कुलर मर्मतका लागि प्लास्टिक टयूबिंग विकास गरे जुन स्ट्रोकको पुनरावृत्ति, मृगौला बिफलता र अंगहरूमा भास्कुलर पुनःस्थापना रोक्न प्रयोग गरियो ।
उनको शल्यक्रियासम्बन्धि आविष्कारले कार्डियोभास्कलुर प्रोस्युडरमा क्रान्ति ल्यायो । कोरोनरी आर्टरी बाईपास, क्यारोटीड एन्डार्टेक्ट्रोमी, कृत्रिम मुटु र भेंट्रिकुलर सहायता उपकरणहरु शामिल छन् । डा. बेकेले प्रख्यात भास्कुलर रिपेयरको ड्याक्रोन ग्राफ्टहरूको प्रयोग गरे । डेबके ड्याक्रोन ग्राफ्ट अब विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ, । सन् १९६३ मा डा. डेकेले ड्यामेज भएको मुटुलाई सहयोग गर्न पहिलो कृत्रिम पम्प स्थापना गरे । अचम्म मान्नुपर्दैन कि डा.बेकेका पुरस्कारहरू धेरै थिए र यसमा राष्ट्रपति पदको स्वतन्त्रता, विज्ञानको राष्ट्रिय पदक, र कंग्रेसल स्वर्ण पदक पनि सामेल थिए । डा. डिबेकेको सन् २००८ मा ९९ वर्षको उमेरमा टेक्सासमा मृत्यु भयो ।
डा.भर्जिनिया अपगरः अपगर स्कोरको आविष्कारक
सन् १९०९ मा जन्मिएका डा.भर्जिनिया अपगरले अपगर स्कोरलाई विकास गरे । यो गर्भबाट भर्खर जन्मेको नवजात शिशुको संक्रमणको आँकलनका लागि पहिलो मानकीकृत मापन हो । अपगर स्कोर अब विश्वव्यापी रूपमा नवजात शिशुको मुटुको दर, श्वासप्रश्वासको प्रयास, मांसपेशी टोन, रिफ्लेक्स प्रतिक्रियामा प्रयोग हुँदै आएको छ । नवजात शिशु जन्मे लगत्तै संयुक्त कुल स्कोरको ०—२ बिन्दुको स्केलमा मूल्याकन गर्न प्रयोग गरिन्छ । हाल १— र ५—मिनेटको अपगर स्कोर मानक र नवजात शिशुको अस्तित्व र न्यूरोलोजिकल विकासको पूर्वानुमानकर्ताको रूपमा स्वीकारिन्छन् । डा. अपगरले प्रसूति एनेस्थेसियाको क्षेत्रमा धेरै योगदान पु¥याए र शिशु अपगर स्कोर र श्रम वितरण र मातृ एनेस्थेसियाको प्रभावहरू बीचको सम्बन्ध प्रदर्शन गरे ।
डा.डन्कन होलाडे (एमडी) र डा.स्टानले जेम्स (एमडी) सँगै मिलेर उनले रगत ग्यास र सीरम एनेस्थेसिया स्तर मापन गर्न नयाँ विधिहरू विकास गरे र शिशुहरू र अत्यधिक अम्लीय रगतमा कम रगत, अक्सिजनेशन कम अपगर स्कोरसँग सम्बन्धित भएको पनि पत्ता लगाए । । डा. अपगर र सहकर्मीहरूले प्रदर्शन गरे कि श्रममा आमाहरूलाई दिइने साइक्लोप्रोपेन एनेस्थेसियाले कम शिशु अपगर स्कोर निम्त्याउन सक्छ । उनी कोलम्बिया युनिभर्सिटी कलेज अफ फिजीशियन एण्ड सर्जन न्यूयोर्कमा पूर्ण प्राध्यापक प्राप्त गर्ने पहिलो महिला थिइन् । उनी ३७ वर्षसम्म चिकित्साशस्त्र क्षेत्रमा योगदान दिन तल्लिन भइन् । उनको मृत्यु ६५ वर्षको उमेरमा न्युयोर्कमा सन् १९७४ मा भयो ।
डा.जर्जस म्याथि : ल्युकेमियाको आविष्कारक
जर्जस माथेको जन्म ९ जुलाई १९२२ मा फ्रान्सको ग्रामीण भेग सेर्मेजेसमा भएको थियो । उनी क्लिनिकल परीक्षणमा अग्रणी थिए । उनी रगतसम्बन्धि विशेषज्ञ हुन् । उनले सन् १९५८ मा पहिलोपटक बोनम्यारो प्रत्यारोपण सफल बनाउन अग्रणी भूमिका खेलेका थिए । भाग्यले डा. म्याथिलाई १९५८ मा उनको सिद्धान्तहरू प्रमाणित गर्ने अवसर प्रदान ग¥यो । धेरै युगोस्लाभियन भौतिकविदहरू आणविक दुर्घटनामा विकिरणको चपेटामा परेका थिए ।
डा. म्याथिले विकिरण विषाक्तताबाट सबैलाई बचाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यसैले डा. म्याथि मानव अल्जेनिक बोनम्यारो प्रत्यारोपण गर्ने पहिलो चिकित्सकहरु मध्ये एक बने र अनिवार्य रुपमा ल्युकेमियाको उपचार पत्ता लगाए । सन् १९६३ मा डा. म्याथिले बोनम्यारो प्रत्यारोपणका साथै ल्यूकेमिया बिरामीलाई निको परे । पछि उनले ग्राफ्ट—वर्सेस—होस्ट रोगलाई पनि परिभाषित गरे । उनी अंकोलोजिष्टसमेत हुन् । उनको मृत्यु ७८ वर्षको उमेरमा २०१० मा फ्रान्समा भएको थियो ।
डा.हेलेन डी गेल : एचआईभी र एड्स नियन्त्रणमा भूमिका
हेलेन डी गेलको जन्म १६ अगस्ट १९५५ मा बफेलोमा भएको थियो । डा. गेल एचआईभी र एड्सका अग्रणी विशेषज्ञहरू मध्ये एक बनिन् । एड्सको प्रभावमा परेका बच्चा, किशोर, किशोरी र परिवारहरूमा उनको विशेष चासो थियो र एचआईभी र एड्सको विश्वव्यापी परिणामहरू राम्ररी अध्ययन गरिन् । उनले युनिभर्सिटी अफ पेन्नेस्भेलिया स्कुल अफ मेडिसिनबाट एमपिचए (जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातकोत्तर ) गरिन् ।
उनी मनोविद् पनि हुन् । उनी फोर्ब्स ‘१०० सबैभन्दा शक्तिशाली महिला’ मध्ये एक हुन् । एचबीभी र एड्सको अध्ययन, नियन्त्रण र रोकथामका साथै उनका अन्य संक्रमित रोगहरू जस्तै क्षयरोगमा उनको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ । डा. गेलले अमेरिकी जनस्वास्थ्य सेवाको आयुक्त कोर्प्समा सहायक सर्जन जनरल र रियर एडमिरल जस्ता प्रतिष्ठित ओहदा पनि सम्हालेकी थिइन् । ६६ वर्षकी उनी अझैं पनि चिकित्सा क्षेत्रमा सक्रिय छिन् ।